MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: လိုင်ဇာမြို့အနီး တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လာသဖြင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ စိုးရိမ်နေ
လိုင်ဇာမြို့အနီး တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လာသဖြင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ စိုးရိမ်နေ
အစိုးရတပ်နှင့် KIO အကြား ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲ များကြောင့် ပစ်ခတ်သံများ လိုင်ဇာမြို့နှင့် ပိုမို နီးကပ်ကြားလာရသဖြင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ တိမ်းရှောင်ရန် နေရာ မရှိသဖြင့် စိုးရိမ်မှုများနှင့် နေထိုင်နေရသည်ဟု KIO မှ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကူညီ စောင့်ရှောက် ရေး တာဝန်ခံ ဦးဒွဲပီဆားက ပြောသည်။
လိုင်ဇာနှင့် ၉ မိုင်ကွာဝေးသည့် ခရာဘွမ် ကျေးရွာအနီးတွင် လည်း မြေပြင်တိုက်ပွဲများ ၄ ရက်ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိပြီး လိုင်ဇာနှင့် ၆ မိုင်ကွာဝေးသည့် အခြားကျေးရွာတရွာဖြစ်သည့် လ၀ါယန်ကျေးရွာ အနီးတွင်မူ မြေပြင် တိုက်ပွဲများသာမက အစိုးရ စစ်တိုက်လေယာဉ်များပါ ယမန်နေ့ညပိုင်းက ကူညီပစ်ခတ်ပေးခဲ့သည်ဟု ဦးဒွဲပီဆားကပြောသည်။
“တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေလို့ သတိနဲ့ နေနေရတယ်။ ကျနော်တို့က မပြောင်း ရွှေ့အောင် လုပ်နေတာ။ အစိုးရဘက်က လဂျားယန် လုန်ရောတ်ဆိုတဲ့ သူတို့စခန်းကနေ ဒီကျနော်တို့ဘက် မနေ့က ကတည်းက ထိုးစစ်ဆင် နေတယ်။ နောက် ခရာဘွမ်ဘက်တော့ ၄ ရက်ရှိပြီ လေကြောင်းနဲ့ နေ့တိုင်းပစ်ကူနေတယ်”ဟု ဦးဒွဲပီဆားက ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး “တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်လာရင်တော့ ခုနေနေတဲ့ လိုင်ဇာမှာ ဆက်နေနိုင်မလား၊ မနေနိုင်တော့ဘူးလား၊ ဒီနေရာမှာ မနေရတော့ဘူး ဆိုရင် ကျနော်တို့အတွက် ပိုပြီး ခက်ခဲလာမယ်။ ပိုပြီး စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်နေတယ်”ဟု သူက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
ထို့ပြင် ယမန်နေ့ည ၁၁ နာရီထိ လက်နက်ကြီးသံများကြောင့် လိုင်ဇာမြို့ နေအိမ်များပင် တုန်ခါမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယနေ့ နံနက်တွင်လည်း ပစ်ခတ်သံများ လိုင်ဇာမြို့နှင့် ပိုမိုနီးကပ်လာ သကဲ့သို့ ကြားရသဖြင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု လိုင်ဇာမြို့ခံ တဦးက ပြောသည်။
“မနေ့က ပိုဆိုးနေတယ်။ လက်နက်ကြီးနဲ့ ဆက်တိုက်ပစ်တယ်။ လဝါယန် အနီးမှာ အစိုးရ စစ်သားတချို့ ညှပ်မိတယ်၊ ကေအိုင်အေဘက်က ပြန်တိုက်နေတယ်။ ခရာဘွမ်ဘက်၊ လဂျားယန်ဘက်မှာလည်း တိုက်ပွဲ တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ခုလည်း အသံကြားနေရတယ်။ ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေက တရုန်းရုန်းဖြစ်နေပြီး တချို့လူတွေ ဒီမှာ နေလို့ မရတော့ဘူး ထင်တယ် ဆိုပြီး ကြောက်နေကြတယ်”ဟု အဆိုပါ လိုင်ဇာမြို့ခံက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာခြင်းကြောင့် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း လိုင်ဇာမြို့ အနီးအနားရှိ ကျေးရွာများမှ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ ထပ်မံ တိုးမြင့်လာ သဖြင့် KIO နယ်မြေ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် တလျှောက် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၇ သောင်းခန့် ရှိနေပြီဟု ခန့်မှန်းထားသည်ဟု စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကူညီ စောင့်ရှောက်ရေး တာဝန်ခံ ဦးဒွဲပီဆားက ပြောသည်။
ထိုပြင် ယခင်က လိုင်ဇာမြို့သို့ လာရောက် ခိုလှုံနေသော စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၁၄,၀၀၀ ရှိ ရာမှ ယခု လိုင်ဇာမြို့ခံ ၆၀၀၀ ကျော်ကိုလည်း ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအဖြစ် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေရသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
“လိုင်ဇာကို လက်နက်ကြီး ကျရောက်လို့ လူတွေ သေရလို့ အဲဒီမှာနေတဲ့ လူတွေကိုလည်း ဒုက္ခသည်စခန်းဘက် ပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်။ လိုင်ဇာမြို့ ခံတွေကလည်း တခြားနေရာ မထွက်ပြေးရပေမဲ့ အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း မလုပ်နိုင်တော့လို့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် စာရင်းထဲထည့်ပြီး ဒုက္ခသည်လို ထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်”ဟု သူက မဇ္စျိမကို ပြော သည်။ ယခုလ ၁၄ ရက်နေ့က လိုင်ဇာမြို့ပေါ် လက်နက်ကြီး ကျရောက်၍ ဒေသခံ လူ သုံးဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
ထို့ပြင် လိုင်ဇာမြို့ပေါ်ရှိ အထက်တန်းကျောင်း တကျောင်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်း နှစ်ကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း တကျောင်း တို့အား ဒီဇင်ဘာလ ကျောင်းပိတ်ရက်မှ ယနေ့ထိ ပိတ်ထားလိုက်ရသဖြင့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားပေါင်း ၂၄၀၀ ခန့် ကျောင်းတက်နိုင်ခြင်း မရှိတော့ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များအတွက် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC နှင့် ကက်သလစ်အသင်းတော်မှ ဂရုနာအဖွဲ့တို့က ပုံမှန်ကူညီထောက်ပံ့ ပေးနေသော်လည်း ယခုလအတွင်း တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လာသဖြင့် တခြားအလှူရှင်များ လာရောက် ကူညီမှုများ လျော့နည်းသွားသည်ဟု ဆိုသည်။
at 1/18/2013 06:58:00 PM
(RFA) ကချင်ပြည်နယ် ဒေသခံတွေက တပိုင်တနိုင် ကျောက်စိမ်း တူးဖေါ်ခွင့် ဥပဒေ ပြဌာန်းပေးဖို့ နဲ့ မြစ်ကြီးနား- မိုးကောင်း- ဖားကန့်လမ်းကို ပြု...
▼ January 13 - January 20 (100)
ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင်လည်း တပ်မတော်နှင့် KIA တို့...
လဂျားယန်သာမက ကချင်ပြည်နယ်အနှံ့ ထိုးစစ်များရပ်ပေးသင...
အပစ်ရပ် အစိုးရသတင်း ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ မြေပြင်တိုက်ပွ...
ကချင်ထိုးစစ်မှာ အစိုးရအနေနဲ့ အရှုံးကြီးရှုံးခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် ကေအိုင...
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်ဆင်ရေး ရပ...
လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာ အနာဟောင်း ကို ပြန်ဆြွ...
တရုတ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ပြဿနာ
ကချင်ထိုးစစ်ရပ်ဖို့ အစိုးရ ကြေညာ
ရန်လိုမုန်းတီးတတ်လာအောင် ဘယ်သူတွေ သင်ပေးသလဲ?
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက် ၀၆၀၀ နာရီမှ စတင်ပြီး...
လဂျားယန် စစ်မျက်နှာကို လူလှိုင်းဖြင် စစ်ဆင်
KIA အဖွဲ့ တပ်မဟာ (၂) တပ်ရင်း (၆) စခန်းဟောင်းအား အစ...
လွှတ်တော်မှ ကချင်စစ်ပွဲအတွက် အရေးကြီးအဆိုတင်
အရပ်သား နေထိုင်ရာနေရာကို လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုသည် စစ်...
ကချင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို တရုတ်တို့ လက်ခံမည်ဖြစ်
ဂျယ်ယန်း စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း ကလေးငယ်များ ဝမ...
ကချင်စစ်ပွဲအရေး အစိုးရက လုံးဝ တာဝန်ရှိ
လိုင်ဇာမြို့အနီး တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လာသဖြင့် စစ်...
လိုင်ဇာ ဒေသခံများ တရုတ်ဘက်သို့ တိမ်းရှောင်ရန် ပြင်...
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့ ကိုယ်တိုင် အုပ်ချုပ်ရေး...
ကချင် အရေးကြောင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ထိခိုက်မှာ ကုလ...
ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို တရုတ် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းဆီ...
ကချင်စစ်ပွဲ အပစ်ရပ်ကြရန် တရုတ် တောင်းဆို၊ တရုတ်ဘက်...
မော်ဝမ်းဆုတောင်းကုန်းအား ဗမာစစ်တပ်မှ လက်နက်ကြီးဖြင...
ရှေ့တိုးနိုင်ခြင်း မရှိသေးသော ဖွန်ပျန်ဘွမ် စခန်းကိ...
ကချင်ပြည် ဖားကန့်မြို့နယ်၌ နှစ်ရက် ဆက်တိုက် တိုက်ပ...
ဇန်န၀ါရီ (၁၇) ရက်နေ့ ညပိုင်း စစ်သတင်းများ
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် KIO ကို ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ထပ...
စစ်ရေးနဲ့ မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ကချင်ပဋိပက
ဇန်န၀ါရီ ၁၇ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း စစ်သတင်းများ
ကချင်အရပ်သားတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ AI တိုက်တွန်း
စစ်ပွဲအခြေအနေ ပြင်းထန် လာပါက ကချင်ပြည်နယ် စစ်ပြေး ...
ရန်ကုန်မှ မိုင်ရှစ်ရာကျော်ဝေးသည့်လိုင်ဇာသို့ ငြိမ်...
ကေအိုင်အိုဌာနချုပ်လိုင်ဇာအနီး အစိုးရတပ် တိုက်ခိုက်...
ဖားကန့်ဒေသ တိုက်ပွဲတွေဆက် ဒေသခံ အမြောက်အများ နယ်စပ...
အစိုးရတပ်က ကာကွယ်စစ်ဆင်နွှဲနေတာလို့ သမ္မတရဲ့ပြောရေးဆ...
KIA တပ်ရင်း (၂၃) ပွိုင့် (၇၇၁) ၌ တိုက်ပွဲပြင်းထန်
KIO နှင့် ဆွေးနွေးရန် ရက်ပိုင်းအတွင်း ဦးအောင်မင်း...
တကမ္ဘာလုံး အပစ်ရပ်ဖို့ တိုက်တွန်း နေသည့်ကြားက လဂျား...
KIA သို့ မြေပြင် ဝေဟင် တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိနေဆဲဟု ...
တိုင်းမှူးက ကချင်ဝန်ကြီးချုပ်ကို ခြိမ်းခြောက်...
ကချင်စစ်ပွဲ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်...
ကချင်အရေး ကိစ္စအပေါ် ထားရှိသော အမေရိကန် အစိုးရ၏ သဘောထား
UWSA, SSPP/SSA, မိုင်းလားအဖွဲ့ တို့ ပူးတွဲ ထုတ်ပြန...
January 15 ya shani hpyen shiga
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း တိုက်ပွဲများ တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့...
Truth News about Myanmar Military Aircraft (မင်းေ...
လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုသံကြောင့် ဖားကန့်စာသင်ကျောင်းမျ...
မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး ရထားလမ်း ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်
ကချင်တိုက်ပွဲများကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများတွင် ဒ...
ကချင်စစ်ပွဲက ပြည်တွင်းစစ်မီး ပြန်လည်ဖန်တီးစေနိုင်ဟ...
အစိုးရတပ် လေကြောင်းမှ ဆက်လက် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေဆဲဟ...
KIA ဗဟိုဌာနချုပ်အနီး အစိုးရတပ် တိုက်လေယာဉ်များဖြင်...
အစိုးရ၏ KIA စစ်ဆင်ရေးအပေါ် UWSA ဝေဖန်
ကချင် ထိုးစစ်များရပ်ရန် ရခိုင်အဖွဲ့များလည်း တောင်းဆို
မြစ်ကြီးနား ဗုံးကွဲမှု စွပ်စွဲခံရသူများကို လူသတ်မှု ...
ကချင်အရေး နှစ်ဖက်လုံး ညှိုနှိုင်းဖြေရှင်းကြဖို့ အမေရ...
အယုတ်ညံ့ဆုံး Media (သို့မဟုတ်) Myanmarexpress.net
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ရထားလမ်းပိုင်း တံတားနှစ်စင်း မု...
တပ်မတော်နှင့် KIA တို့အကြား ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဖြစ...
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား...
ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး လွှတ်တော်မှာ ကြေညာချက်ထ...
ဗမာ တပ်မတော် နည်းဗျူဟာ...
KIO က ပြောင်းရွှေ့မည်မဟုတ် ဆိုသော်လည်း တိမ်းရှောင်မ...
ဗမာအစိုးရစစ်တပ်မှ ကထန်ရွာအား လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်...
အစိုးရ တပ်ဖွဲ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လိုင်ဇာမြ...
ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းများ တိုက်ခိုက်ခံရမည်ကို စိုးရိမ်နေ
KIA မှ ဖမ်းမိထားတဲ့ အစိုးရစစ်သား စစ်သုံ့ပန်းတွေကို...
ကချင်ပြည်နယ်စစ်ပွဲများကို အမေရိကန်ရောက် ကချင်များ ...
ဗမာစစ်တပ် လိုင်ဇာသို့ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ် အပြစ်မဲ့ပြည...
MYITKYINA HTA RAMMA NI HPE RIM LAHKAWN
KIA ကိစ္စနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး သမ္မတနှင့် တပ်ချုပ် သဘောထာ...
Laiza Kachin news: Burmese Army killed Kachin civi...
၀ိညာဉ်များ ကခုန်နေမည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၏ ကချင်ပြည်နယ်နေ...
အစိုးရဘက်မှ လက်နက်ကြီးကျည်ဆန်များ လိုင်ဇာ ရပ်ကွက်အ...
ကချင်ဒေသ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေဆဲ
မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး ရထား မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရ
ကချင်အရေးကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ ဒဲရစ်မစ်ချဲလ်ကို မွန်...
ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းတွင်းဒေသဖက်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်နေ
ဗမာ စစ်တပ်ရဲ့ စစ်ရာဇ၀တ်မှု ကို ထောက်ပြခြင်းဟာ ကေအို...
MYEN NI LAIZA DE LAKNAK KABA GAP MUNG MASHA (2) SI
ကေအိုင်အေတပ်ရင်း (၂၁) ဒေသသို့ စစ်လေယာဉ်များဖြင့် တ...
ဖားကန့် ကထန်ယန်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
မန္တလေး - မြစ်ကြီးနား အထူးရထား မိုင်းခွဲခံရ ၊ ခရီး...
လူသားမိုင်းရှင်းကိရိယာအတွက် မြစ်ကြီးနားတွင် လူဖမ်း...
ကချင်အရေး အမေရိကန်အစိုးရ ဖိအားပေးဖို့ ၀ါရှင်တန်မှာ...
The Voice Weekly မှာ ဖေါ်ပြတဲ့ ကေအိုင်အေ အလင်းဝင် သ...
ကျနော်တို့နားလည်သလို ခင်များတို့ နားမလည်ဘူး
လဂျားယန်စစ်မြေပြင်၌ အစိုးရစစ်ရဟတ်ယာဉ် တစင်း ပစ်ချခံရ